केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: October 2009
बेलायत यात्राको क्रममा बेलायत पसेयता खासै काम नभएकोले दिनहरु घुमघामै बितिरहेको छ । नया संसार नया जिवनशैली र एकदम नया नया प्रविधिको बिचमा हराउन पुग्दा कता कता आफैलाइ उभिएर खोज्नु पर्छ । बिकसित देशको रौनकतामा उभिएर आफ्नो देशको कल्पना गर्दाको मज्जा नै अर्कै हुन्छ । नया सँसारको नया चालचलन रिति रिवाज रहनसहन सँग समायोजन हुनलाइ केही समय त लाग्छनै यसै दौरानमा आफुलाइ डोराइ रहेछु । सँसार बिचित्रको छ बिज्ञान र प्रविधिले उचाइ लिइ सकेको यस भुमिमा जताततै सुविधै सुविधा छ । यहि सुविधाहरुलाइ सदुपयोग गर्दै र म सँग बचेको समयको पनि सदुपयोग गर्ने बिचारले यसो यहाको केही नया नौलो खुराकहरु बटुल्ने जमर्कोको साथ दौडिए म्याडम टुसुड तिर । यहा तत्कालै गै हाल्ने मेरो योजना थिएन तर मेरो गुरु सँग एक दिन बेलुकी च्याटमा भेट भयो उहाले सोध्नु भो "घुमघाममै बितिरा होला हैन तिम्रो अनि म्याडम टुसुड गयौ? गा छैनौ भने जाउ एकदम घुम्नै पर्ने ठाउ हो" र अफ लाइन पनि भै हाल्नु भो मैले त्यो भन्दा अरु सोध्ने मौका पाइन सर सँग। बिहान मात्र त्यहा खिचेको नानिहरुको फोटो हेरेकी थिए रहेछु तर मलाइ यो नामबारे खासै जानकारी थिएन। मैले बैनिलाइ सोधे यो ठाँउ कहा पर्छ र यो कस्तो छ?हास्दै भनिन विहान हेरेको फोटो त्यै त हो नि सँग्राहलय जस्तै छ। मैले कुरा मिलाइ हाले उनको पनि फुर्सद र मेरो पनि।
यो लण्डन सहरको मुख्य स्थान मध्यको एक यो वार्मिनिस्टर युनिभर्सीटिको ठ्याक्कै अपोजिट तिर अवस्थित। यो एउटा सँग्रहायल जहा हरेक दिन १५००० देखि २०००० सम्म मानिसहरुको प्रवेश हुदो रहेछ । अरुको लागि पुरानो नै भए पनि यो मेरो लागि नया नौलो नै अनुभव हो। जहा भित्र जानुको लागि कम्तिमा साढे एक घण्टा लाइनमा उभिनु पर्दो रहेछ। मैले नेपालमा विजुलिको बिल तिर्न, पानिको बिल तिर्न र फोनको बिलमात्र लाइनमा बसेको थिए तर यहा सँग्राहालय हेर्न पनि त्यति लाइन बस्नु पर्दो रहेछ । यो निकै महगोँ पनि लाग्यो मलाइ एक जना बरावर २५ पाउण्ड लाग्ने रहेछ एकपटकलाइ तर यहा अरु सुविधा पनि रहेछ जस्तै यो ठाउ र अन्य बेलायतको पर्यटकिय स्थलको टिकट लिने हो भने सस्तो पर्न जाने रहेछ । यसरी सँगै काटिएको टिकटको एक महिना सम्म म्याद रहनेहुनाले सजिलै लाग्यो ।
यो म्याडम टुसुद न्युयोर्क,जर्मनी,चिन लगाएत सँसारको अन्य १० मुलुकमा पनि रहेछ । यस भित्र बिभिन्न देशका हस्तिहरुको जिवित झै लाग्ने मुर्तिहरु राखिएका छन् । हजारौ पर्यटकको माझमा आफुलाइ पनि उनीहरु सँगै मिसाउदा साच्चै रमाइलो महसुस हुन्छ । यस भित्र चर्चित गायिका ब्रिट्नि स्पेयर्स, माइकल ज्याक्सन, बब मार्ली को वास्तविक झै लाग्ने मुर्तीहरु राखिएका छन् । यहा राजनितिज्ञ, अभिनेता, खेलाडी, गाएक गायिका,बेलायति राजपरिवारका सदस्यहरु देखि संचारकर्मी साथै बेलायति चर्चित ब्यक्तित्व साइमन सम्म सबैको मुर्तिहरु राखिएका छन ।यहा भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय अभिनेताहरु अमिताभ,शाहरुख,सलमान, देखि सचिन तेन्दुल्कर, महात्मा गान्धि सबैको मुर्तीहरुले स्थान पाएका छन् । बाराक ओवामा, बिलक्लिन्टन, बेनेजिर भुट्टो लगाएत दलाइलामाले समेत ठाउ पाएका छन् यसरी सबै देशका सबै हस्तिहरुले स्थान पाएको ठाउमा नेपालको बारेमा भने कुनै केही सँकेत छैन हुनत नेपालको बारेमा कस्ले त्यति धेरै चासो दिएरकाम नै पो गरेका छन् र ?
यहा भित्र हरेक चिजलाइ छुन र राम्रो सँग नियाल्न सकिन्छ । हरेक देशलाइ प्रतिनिधित्व गर्ने मुर्ति लगाएत यहा बच्चाहरुको लागी खेल्ने ठाउ, रमाइलोको लागी भुत घर पनि राखिएको रहेछ । जहा जिवित मानिसहरु नै हिँस्रक भुत झै देखिने डर लाग्दो लुगा लगाएर बसेका हुन्छन। ओडार झै लाग्ने अन्ध्यारो कोठामा माथी माथी मानिसका अस्थिर पञ्जरहरु झुण्डाइएका छन् । कुना काप्चामा डरलाग्दो लुगालाएर मुर्ती झै देखिने मानिसले एक्कासी झम्टदा मुटुले ठाउ नै छोड्छ एकछिनलाइ। तीनभागको एकभाग सम्म क्यामेराहरु चलाउन दिइएपनि बाँकि भागमा क्यामेरामा त्यहाका चित्रहरु कैद गर्न बन्देज गरिएको छ। भुत घरबाट निस्कि सके पश्चात मसिनो मसिनो २ जना अट्ने खालको चुटुक्क चुटुक्क परेको ट्याक्सीहरु रेलको तरिकाले सररररर बग्दै हामीलाइ लिन आइ रहेका हुन्छन । जसको सहायताले पुरानो सैलीको बेलायतलाई नियाल्न सकिन्छ ।
यहा बिभिन्न प्रकारका जिवन शैलिहरु नियाल्न सक्छौ । हामि ती चुटुक्क परेको ट्याक्सीमा बसेपछी सुरु हुन्छ ऐतिहासीक लण्डनको दृष्यहरु । त्यहा पुराना जमानाका हातहतियार, मानिसहरु साथै रन्दाले काठहरु चिरिरहेका तथा ढुँगे युगका केही अवसेसहरु नियाल्न सक्छौ । यसका साथै दोश्रो बिश्वयुद्दताकाको घटना समेटिएको मुर्तीहरु जस्तै बम बारुदले छटपटीएका मानिस, भत्किएका घरले थिचिएका बालबालिकाहहरु उद्दारमा खटिएका सेनाहरु यसपश्चात बिस्तारै हाम्रो ट्याक्सिमोडीएर उकालो लाग्छ । आधुनिक युगको सुरुवात सँगै झिलिमिली बेलायतको जमाना सुरुहुन्छ जहा नया प्रविधि लगाएत आधुनिक सरसामाग्री नया जमानाको महसुस गर्न सक्छौ । ट्याक्सी यात्राको अन्त्य पश्चात केही पसलहरु फोटो खिच्ने ठाउ जहा ३५ पाउण्ड तिरे पछि सेतो पारदर्सी चम्किलो ढुँगामा आफ्नो फोटो राखेर बनाउन सकिन्छ । यसको अर्को कुनामा एउटा क्रिस्टलबल पनि राखिएको छ जहा एक पाउण्ड तिरे पछि तपाइको भाग्य पनि थाहा पाउन सक्नु हुनेछ । लगभग २ घण्टाको यात्रा पश्चात बाहिर निस्कन सकिन्छ । यो ठाउ वास्तवमै एक रमणिय र महत्वपुर्ण छ ।
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 10:16 AM5comments: Links to this post
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 1:59 PM9comments: Links to this post
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 3:04 AM4comments: Links to this post
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 10:55 PM5comments: Links to this post